မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: အတွေးသစ် အရေးသစ်နဲ့ ဗေဒါ ပြန်လာပြီ...
စိုးမရွံ့တွန့်မတုန် မိုးနှင့်လေ ရေရှုပ်ထွေး၊ ရွေးမျှမဖြုံ။ ဆန်လိုက်ပြန်တုံ စုန်လိုက်ပြန်ရ ခေါက်ပေါင်းမရေနိုင်လို့ ဗေဒါခိုင် သည်မြစ်ထဲ ရဲခဲ့သည်ပေါ့။
no need to thank to me...it's your own decision...it's only depend on you...congratulation for winning on yor misery in short time.. keep it up...god be with you!
ဆက်ရေးဗျာ. အားပေးနေမယ်. မဗေဒါရေ...